ခရီးသည်မော်ကွန်းလေ့ - ထို rayhab
[25 / 08 / 2019] Denizli နေ့သြဂုတ်လ 28 18 ပိုနယူးဘတ်စ်ကားလိုင်းဝန်ဆောင်မှုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်	20 Denizli
[25 / 08 / 2019] CHP Thompson က '' Haydarpasa ရထားဘူတာဟိုတယ် Mir ပြုပါသလော '' ဟုမေးခဲ့သည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[25 / 08 / 2019] တူရကီ TCDD အတွက်သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦးကိုရောင်းမပါ	06 တူရကီ
[25 / 08 / 2019] ခြောက်လ CNC ဘီးခုံရထားကြမ်းပြင် Rafamet UGA 300 တည်းဖြတ်မူ	35 Izmir
[24 / 08 / 2019] Bursalılarအာရုံစူးစိုက်မှု, bit စောစောလေ့လာရေးခရီးအတွက် Bursaray ပါလိမ့်မယ်	16 Bursa
သငျသညျအခြို့သောသတင်းရင်းမြစ်အတွက် name ကိုရွေးကောက်တော်မူကြလျှင်İZBAN, Izmir အတွက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတူရကီရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ခရီးသည်ရထားလမ်းစနစ်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အတွက်စီမံကိန်းနှင့် TCDD မိတ်ဖက်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ Selcuk ၏မြို့ရွာတို့အကြားတစ်ဦးလေးဆယ်ကီလိုမီတာလိုင်းနှင့်အတူ 136 အပေါ် Aliaga [ပို ... ]
BAŞKENTRAYတူရကီအတွက်တူရကီ၏မြို့တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ခရီးသည်ရထားစနစ်ဖြစ်သည်။ Mamak နှင့် Sincan ခရိုင် 36 ကီလိုမီတာအကြားလိုင်းပေါ်Kayaşနှစ်ဆယ်ရှစ်ဘူတာ၏ခရိုင်တွင်တည်ရှိသည်။ တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံနှင့်အညီ, TCDD ပို့ဆောင်ရေးအော်ပရေတာရှိပါတယ်။ Sincan နှင့်အတူ [ပို ... ]
Karşıyaka'' ပလက်ဖောင်းပေါ်နှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံညှိနှိုင်းရေးကော်မရှင်အဖြစ်ရှုမြင်ပြဿနာများ၏နှစ်ခုအမြိုးမြိုးအတွက်İZBANခရိုင်၏အောက်ခြေကနေလိုင်း၏အထက်အပိုင်းများနှင့်စည်ပင်သာယာရုံးသို့နေရာယူအရပျ၌ Subsubsidiary တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ Çiğliမြူနီစီပယ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မရှင်အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် Superstructure အတွက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ [ပို ... ]
တူရကီအခမဲ့ခရီးသွားလာကတ်များအမှုဆောင်အဆိုပါBAŞKENTRAYအတွေ့အကြုံပြဿနာများရှုပ်ထွေးစေခြင်းဖြစ်သည်။ BAŞKENTRAYအတွက်အခမဲ့ခရီးသွားလာကတ်များ၏အသုံးပြုမှုအတွေ့အကြုံပြဿနာများဧပြီလဖွင့်လှစ်ရှုပ်ထွေးမှုများဖြစ်ပေါ်စေလျက်ရှိသည်။ တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်၏ public [ပို ... ]
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းမှအစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ဖွနီးကပ်အိမ်ရွှေ့ဖို့လိုသူ၏ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှု။ အများဆုံးရထားလမ်းလိုင်းများအတွက်ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, Metrobus, Marmaray option ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားထားကြောင်းပထမဦးဆုံး 20196လအတွင်းအစီရင်ခံစာအရသိရသည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအာဒိုဂန်၏နိုင်ငံသားရန်၎င်း၏နီးကပ်ဖြစ်ပါသည် [ပို ... ]
ဖော်ထုတ်ခဲ့သည့်နေရာ 2020 တစ်နှစ်တာအခကြေးငွေများ Ankarakart
2020 နှစ်ပေါင်းလက်ရှိအခမဲ့သို့မဟုတ်လျှော့အသုံးပြုသော Ankarakart တူရကီမြို့တော်မြို့တော်ဝန် Mansoor မဲသြဂုတ်လအစည်းအဝေးတွင်အနှေးသမ္မတရွေးကောက်ပွဲတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ညီလာခံမှာကောက်ခံဗီဇာကြေးကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်အတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်ညီလာခံ [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်ဘတ်စ်ကား, Metro Marmaray အခမဲ့ Minden အတွက် Bayram? အဆိုပါအနစ်နာခံ 2019 အခမဲ့ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးအောင်မင်း၏အဘို့ဆောင်သောပွဲ?
အဆိုပြုချက်အပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားအဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ညီလာခံဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğluရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်, အနစ်နာခံ၏ပွဲနှင့်အတူ 30 သြဂုတ်လအောင်ပွဲခံနေ့များတွင်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသငျသညျအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုငါပေးမည်။ IETT, နိုင်ငံသားများအတွက် IMM သားကောင်ဖြတ်တောက်ခြင်းဧရိယာများအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဆင်ပြေအချိန်စည်းရုံးလိမ့်မယ်။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော် [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ညီလာခံ, အနစ်နာခံ၏ပွဲ, အောင်ပွဲခံနေ့သြဂုတ်လ 309ကျောင်းကိုအပေါ်တနင်္လာနေ့တွင်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူစက်တင်ဘာလ၌ဖွင့်လှစ်ဖို့အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဇူလိုင်လ IMM ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğlu၏ဥက္ကဋ္ဌနေရာအောက်မှာအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ညီလာခံ, [ပို ... ]
Izmir Da အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၌ဤနေ့
Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, မနက်စောစော Al-Adha စဉ်အတွင်းအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုကိုသင်တာဝန်ခံအခမဲ့ငါပေးမည်။ Applications ကိုဘတ်စ်ကား, မီးရထားနှင့်ပင်လယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အွန်မနက်စောစော Al-Adha ၏လူ၎င်းတို့၏ခရီးစဉ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့နိုင်ရန်အတွက် Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သည်, အားလပ်ရက်ကာလအတွင်းအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများ [ပို ... ]
အဆင်ပြေခြင်း, Gaziray စီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရေး site ကိုခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ်
TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအလီ Ihsan သင့်လျော်သောပုခရီးစဉ်၏နယ်ပယ်အတွင်းထွက်ယူသွားသင့်လျော်သော Gaziantep အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်အခြေအနေအကြောင်းရထားလမ်းစီမံကိန်းများနှင့် Gaziray စီမံကိန်းတာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်လက်ခံရရှိ, Gaziantep အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်ဒါဝိဒ်နှင်းဆီအာဏာပိုင်သွားရောက်ခဲ့သည်။ Gaziantep အတွက်အဆင်ပြေပြေနဲ့နှင်းဆီ, ရထားလမ်းစီမံကိန်းများ [ပို ... ]
BAŞKENTRAYတူရကီ၏မြို့အတွက်ခရီးသွားလာအထောက်အကူပြုသောအဓိကစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ စုစုပေါင်းများတွင်ဤစီမံကိန်းတူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်, တူရကီ, Sivas နှင့်တူရကီ၏ 36 ကီလိုမီတာ, Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းအားတူရကီမြို့အတွင်းပိုင်းထဲသို့ပေါင်းစည်းဖြစ်ပါတယ်။ တူရကီ Sincan အကြား [ပို ... ]
Aliaga, မသန်စွမ်းသူများအတွက်အတွက်İZBANဘူတာရုံထဲမှာဓာတ်လှေကားအလုပ်လုပ်ကိုင်, သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်ကလေးလက်တွန်းလှည်းအဆိုပါပေးနေတာဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကောငျးခြီး Ergun Aliağaekspresနေအစီရင်ခံစာအရ; "Aliaga မသန်စွမ်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစည်းအရုံးအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ izban အတွက်ဓာတ်လှေကားပျက်ကွက်ခြင်းဖြင့်ကြုံတွေ့အဆိုပါအခက်အခဲတွေမောရှေ Pala ကပြောကြားခဲ့သည်။ [ပို ... ]
အဆိုပါ IMM ဖော်ပြချက် Related လိုက်ပါသွား Handicapped နှင့်မသန်စွမ်း istanbulkart
ကြောင့် protocol ကိုရန်ဗီဇာဖြစ်စဉ်ကိုကနျြးမာရေးစနစ်၏န်ကြီးဌာနနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည် istanbulkart ရှေ့တော်၌ထိုအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, "မသန်စွမ်း" နှင့် "အတူမသန်စွမ်း" နဲ့ကနျြးမာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့အကြားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ကနျြးမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်အခမဲ့ istanbulkart အကြားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ protocol ကိုအောက်မှာ [ပို ... ]
ဇူလိုင်လအတွက်အာဏာသိမ်းမှုကြိုးပမ်းမှု၏ 153။ အဆိုပါ Marmaray BAŞKENTRAYနှင့်လုပ်အခမဲ့အချိန်နှင့်အတူအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများ၏နှစ်ပတ်လည်နေ့။ တူရကီ Recep Tayyip အာဒိုဂန်၏နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏လက်မှတ်အားဖြင့်တရားဝင်ပြန်တမ်းထုတ်ဝေနိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့အမိန့်နှင့်အတူထွက်သယ်ဆောင်အာဏာသိမ်းကြိုးပမ်းမှု၏ဇူလိုင်လ 15 2016 အတွက် [ပို ... ]
Gebze Halkalı Marmaray လိုင်း, အဘယ်သူမျှမပြဿနာရှိခဲ့!
Gebze-Halkalı အဆိုပါညီလာခံ၏အစီအစဉ်များအပေါ်ခဲ့တာအတော်များများစွပ်စွဲချက်များကို Marmaray လိုင်းများအတွက်အစီအစဉ်မှလာကြပြီနှင့် CHP Kocaeli လက်ထောက် Heydar သူဟာအာကာကဤစွပ်စွဲချက်ရွှေ့။ ဒီကနေပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Cahit Turhan ကပင်ပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းအဖြေတို့သည် လာ. , ဒေသခံရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မှီ [ပို ... ]
Isparta Suburban လျှပ်စစ်လိုင်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်စတင်
Isparta မြို့တော်ဝန်Başdeğirငွေကြေး, မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းရဲ့တဦးတည်း TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအဘို့ '' Suburban လျှပ်စစ်လိုင်း '' သင့်လျော်သောအတူတူရကီအတွက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ TCDD ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့စီမံကိန်း Isparta ဆီသို့ရောက် လာ. , စီမံကိန်းအပြီးသတ်ပါလိမ့်မည်ဆန်းစစ်ပါလိမ့်မယ်။ ရရှိနိုင် [ပို ... ]
လုပ်ငန်းခွင်အပြီးအစီးလိုင်းမြို့နယ်၌ Gaziray 85 ရာခိုင်နှုန်း
တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံ (TCDD) ၏ Gaziantep တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ခြင်း, protocol ၏အတိုင်းအတာဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်၏ 22 ရာခိုင်နှုန်း 2014 မေလ 85 Gaziray ခရီးသွားလက်မှတ်ရထားစီမံကိန်းပြီးစီးခဲ့ပြီး၏နေ့စွဲအကြားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ သီခငျြးမြား၏ဘာသာရပ်ဖြစ်သောမြေယာရထား, မဟာမြန်နှုန်းရထားပြောင်း [ပို ... ]
ကြောင့် izban အတွက်လေယာဉ်ခရီးစဉ်စောင့်ရှောက်မှုစီမံကိန်းအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုမှ
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့် Izmir ရဲ့မြို့ပြအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြောင့်İZBAN၏ကြီးမားသောဝန်ယူရာပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအလုပ်နှင့်အတူဘူတာအကြားလုပ်ခံရဖို့ Menemen Menemen, အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းကြောင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအလုပ်ဖို့အချိန်ပြောင်းလဲသွားသည်။ izban ကနေကြေငြာချက်အရ, 1 [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် traffic Density6ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ရန်
သိသိသာသာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောသုတေသီများကလျှော့ချကအတည်ပြုထားတဲ့ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုဖို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်စမတ်ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာအစ္စတန်ဘူလ်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်လူဦးရေနှင့်မော်တော်ယာဉ်များအရေအတွက်တို့၏စီးပွါးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနေသော်လည်း။ ယာဉ်အသွားအလာအချက်အလက်များ၏ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးပံ့ပိုးပေး [ပို ... ]
သူခိုးဘရိတ် Izmir အတွက်ရထား
အဆိုပါİZBANနှင့်ခရီးသည်ရထားအတွက်မီးရထားလမ်းတစ်ဦးတစ်လတစ်ကြိမ် Izmir714 အတွက်ခိုးယူခဲ့သောမှတဆင့်ဖိုင်ဘာစောင့်ကြည့်ရေးကေဘယ်လ်ကြိုးများနှင့်ဘရိတ်စနစ်များကို။ 100 တထောင်ပေါင်မြန်မာစာသားကိုYeniasır၏တွေလည်းထိခိုက်နစ်နာစေရန်လူထုဦးဆောင်သူကိုနိုင်ငံသားများသူခိုးများ၏ဘဝတွေကိုအန္တရာယ် [ပို ... ]
မြေပုံနှင့် Marmaray Gebze Halkalı Marmaray စခန်းများနှင့်ပျံသန်းမှုနာရီ: ဥရောပနှင့် Anatolian ဘေးထွက်ဆက်သွယ်အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ Marmaray စီမံကိန်းကို Halkalı နှင့် Metro နှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်အားလုံးကိုရပ်နှင့်အချိန် Gebze များ၏ content တှငျတှေ့နိုငျပါသညျ။ Halkalı Gebze [ပို ... ]
Gebze Fatih - အဆုံးဆီသို့Çayırovaဘူတာ Link ကိုလမ်းမ
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, နိုင်ငံသားများအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလျော့ပါးစေရန်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းသောကြောင့်မတ်လ 2019 နှစ်ပေါင်း Gebze ဖွင့်လှစ် - Halkalı အဆိုပါ Gebze Fatih အတွက်နိုင်ငံသားများ၏ဆင်ခြေဖုံးလိုင်းနှင့်အဆင်ပြေÇayırovaမီးရထားဘူတာရုံနှင့်ကားလမ်း၏ D-100 ခြမ်း၏အခြားအချက်များအပေါ် [ပို ... ]
Marmaray အသုံးပြုသူများငွေပေးဆောင်ပြုလုပ်ခြင်းသန်း! .. သင်ဟာပိုသတိပြုပါ! ..
Marmaray လိုင်း Gebze-Halkalı ခရီးသည်လိုင်းခရီးသည်များ၏ထို့အပြင်နှင့်အတူအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တာကိုသစ်ကိုစျေးနှုန်းစနစ်၏သတိထားမိမပိုပိုက်ဆံပေးဆောင်နေကြပါတယ် .. အသုံးပြုသူများသည် '' ကတ်များပြန်ခံရဘူတာရုံတွင်ပါရှိသော device ကိုပြန်သွားဖို့ဆုံးမသွန်သင်ကတ်များနှင့်အတူလိင်တံချဲ့ပေါ်စဲစွဲချက်ပြီးနောက်ခရီးစဉ်ကို .. Marmaray [ပို ... ]
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်, ကျနော်တို့ izban ရာခိုင်နှုန်း xnumx ရဲ့မ
ဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန် Izmir İZBANမှတဆင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုပေး၏။ အာဒိုဂန်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကကောက်ယူ Izmir ခရီးသွားလက်မှတ် LINE (İZBAN) ထို xnumx ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းကိုဖော်ပြထား, Izmir တွင်တည်ရှိသည်တစ်ကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ Muayede အတွက်ဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်, Dolmabahce နန်းတော်ခန်းမ [ပို ... ]
ဘာမြူဒါတြိဂံခဲ့ခရိုင်မှ Izmit ပြည်နယ်တွင်ရထား
လွန်ခဲ့သောလအတွင်းအတွက်လေ့လာရေးခရီးန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူစတင် Halkalı - Gebze ခရီးသည်လိုင်းပြတ်ရွေ့၏အဆုံးမဆိုလိုပါ။ ရထားများ၏ချွတ်ယွင်းလုနီးပါးနေ့တိုင်းမနေ့ကအတူတူပုံရိပ်တွေအရပျကိုလုယူရှိရာဒေသတွင်။ Kocaeli နှင့် Sakarya နိုင်ငံသားများ [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်အခမဲ့ Minden အတွက်မနက်စောစော Al-Fitr နှင့်မေလတွင် 19 အပေါ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး?
IMM ညီလာခံ, မနက်စောစော Al-Fitr နှင့် 19 မေလတွင်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အခမဲ့ဖြစ်ရန်အတွက်ကောင်စီကလက်ခံခဲ့ပါတယ်။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ညီလာခံအဆောက်အဦးများနှင့် IBB Sarachane 1 တှငျကငျြးပခဲ့အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM) ညီလာခံ။ လက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌကောင်းကင်Gümüşdağညွှန်ကြား [ပို ... ]
ဿွာန်၏အခမဲ့ Izmir ပဲန်နီအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 19 မေလ 1,
Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, Atatürk၏ 19 မေလတွင်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ပွဲကျင်းပမြင်ကွင်းတစ်ခုအတွက်စိတ်အားထက်သန်ခြင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်ပါဝင်မှုဖြစ်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်တလျှောက်လုံးတနင်္ဂနွေ, လူငယ်နှင့်အားကစားဆိုင်ရာနေ့တွင်ရာအရပ်ကိုယူပါလိမ့်မယ် 1 တစ်ပြားအဖြစ်သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ Metropolitan ခရိုင်ကောင်စီ [ပို ... ]
Fatih နှင့်Çayırovaရထားဘူတာရန်လွယ်ကူ Access ကို
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရှူဖို့အလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းသောကြောင့် Gebze အတွက်မတ်လဖွင့်လှစ် - Halkalı တစ်ဦးစိတ်အေးလက်အေးလမ်းအတွက်ခရီးသည်လိုင်းရထားဘူတာရုံÇayırova Gebze Fatih နှင့်လမ်းနှင့်အခြားအချက်များ၏ D-100 ခြမ်းများ၏နိုင်ငံသားများအပေါ် [ပို ... ]
ထောက်ပြ: "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရထားလမ်းတစ်စီမံကိနျးအတှကျ AFRAY အလွန်သင့်လျော်သော"
TCDD7။ သတင်းစာမှဒေသဆိုင်ရာဦးစီးချုပ် Manager ကအာဒံကို Sharp က, Afyonkarahisar မြို့တော်ဝန် Mehmet Zeybek AFRAY, ရွေးကောက်ပွဲကတိတျောတစျခုစီမံကိန်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်အရေးပါသောရှင်းလင်းချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AFRAY ရထားလမ်းများအတွက်အလွန်အဆင်ပြေသောစီမံကိန်း ", ထောက်ပြသည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ "အားသာချက်၏အားနည်းချက်မှဖွင့် [ပို ... ]
AK ပါတီမြို့တော်ဝန် Mehmet Zeybek သူတို့ Afyonkarahisar ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူချောမွေ့မယ်လို့ပြောပါတယ်။ Zeybek "ကျနော်တို့လိုင်းကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ် AFRAY ဆင်ခြေဖုံးရထားလမ်းဖွင့်ဖို့ရည်ရွယ်ယခုနှစ်အကုန်တွင်မြို့သူမြို့သားမျက်နှာ," ဟု၎င်းကပြောသည်။ ယင်း AK ပါတီ Afyonkarahisar မြို့တော်ဝန်အတွက်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရမတ်လရွေးကောက်ပွဲတွင် 31 [ပို ... ]
Denizli နေ့သြဂုတ်လ 28 18 ပိုနယူးဘတ်စ်ကားလိုင်းဝန်ဆောင်မှုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်
CHP Thompson က '' Haydarpasa ရထားဘူတာဟိုတယ် Mir ပြုပါသလော '' ဟုမေးခဲ့သည်
တူရကီ TCDD အတွက်သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦးကိုရောင်းမပါ
ခြောက်လ CNC ဘီးခုံရထားကြမ်းပြင် Rafamet UGA 300 တည်းဖြတ်မူ
အားကစားပွဲများများအတွက် Adana မြို့တော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပံ့ပိုးမှု
Bursalılarအာရုံစူးစိုက်မှု, bit စောစောလေ့လာရေးခရီးအတွက် Bursaray ပါလိမ့်မယ်
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ သြဂုတ်လ 2019 (374) ဇူလိုင်လ 2019 (637) ဇွန်လ 2019 (503) မေလ 2019 (525) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (436) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (580) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (555) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (494) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (536) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (770) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (809) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)